::: XABSIGA HARGEYSA :::
Tacadiyada xabsiga Hargaysa ... daawo sawiro naxdinleh oo laga soo qaaday jeelka hargaysa -
Sawirka: Shiikh Maxamed Shiikh Ismaaciil)
[Video-ga ka daawo halkan...]
Documentigan ayaa ka xogwaramaya xaalada jeelka hargaysa iyo dadkii lagu eedeeyey in ay argagixiso yihiin waa sida uu maamulka lamagac baxay Somaliland ku tilmaamay.
Documentigan ayaa waxa ka muuqda wadaado ku xidhan jeelka hargaysa oo sixun loo garaacayo, jidhdil foolxun ayaa lagula kacayaa wadaadan, Qoorta iyo Macdanta ayaa koronto lagag hayaa sida filimkan ka muuqata .
Waxaa ka mid ah wadaadadan la jidh diloyo sheikh Maxamed Shiikh Ismaaciil oo ah wadaad hargaysa u dhashay .
1986 waxa uu ka baxay oo uu dhamaystay Jaamacadda Muqdisho kuliyadda Xnaanada Xoolaha.
Sheekhu waxa uu ku soo bartay cilmiga loo yaqaan (saykoolajiyadda) .
Hadaba jidhdilid xoogan ayaa sheeka iyo asxaabtiisaba loogu gaystaa jeelka hargaysa .
Muuqaaladan ku lifaaqan warkan waxay muujinayaa sida ay askartu u jidhdilayso wadaadka .
Waxaa kamid ah culimada kaleeto ee jeelkaa ku xidhan ee ciqaabta loogu gaysto.
Maxamed Maxamuud Nuur .
Daa�uud Saalax Iidle Cilmi
Indhacadde - Oo isku dayey in uu jeelkaa ka baxsado, laakiin ay isuuroobi wayday-
Muuse Cali Yuusuf oo isga naafo culisi ay gacmaha ka soo gaadhay cadibka lagu hayey awgood.
Isku soo wada duub oo Shiikh Maxamed Shiikh Ismaaciil iyo ragiisa in la ciqaabo oo jidhdil loo gaysto waxaa Somaliland kaga danbaysa Itoobiya, hadaba toloow aayaha danbe ee ragani muxuu ku danbayn doonaa? Ma xabashi baa loo dhiibi doonaa, kadibna maraykan oo hoygoodu waxa uu noqon doonaa jeelka naxariista daran ee Gontanaaba bey?
Mise dheehdoow, ragan ahlu diinka ah xukuumada Hargaysa wadadooday u banayn doonaan ?
Shacabka reer Somaliland iyagu ma raali bay ka yihiin waxyaabahan foosha xun ee lagula kacayo culimadooda ?
mise shacabku way ka diirilahaayeen oo waa shacab muslin ah, ee maba dhaadana xaqiiqda dhabta ah ?
dheehde bal dhab u fiirso sawirada oo dhimiradaada la kaasho !!!!!!!!!!!!!!!!
Tawakal | uaabdm@yahoo.com